Nzira yekubhadhara pa webhusaiti yedu nekunyika dzese Bhanji kutengesa SWIFT?
Nzira yekubhadhara sei kurongeka pane webhutaneti redu nevepasi rose Bhenji kutora SWIFT?
NeHGH Thailand October 08, 2017
Chii chinokurumidza kubhadhara? Kunzwa, kukurumidza uye kuchengeteka kwekushandisa
SWIFT kubhadhara mari yekuendesa mari kumarudzi ose pakati pebhangi vanhu uye masangano epamutemo kuburikidza neSWIFT International yenhare yekubhadhara.
Nhengo dzehutaneti panguva ino dzinopfuura 10 zviuru zvemakambani emari mune nyika dze210. Izvi zvinokupa iwe kukwanisa kukurumidze kutumira mari dzepasi rose mumari dzakasiyana-siyana munyika dzakawanda dzakabudirira.
Nzira yekuendesa mari sei neyo SWIFT system iri paIndaneti?
Mabhandi mazhinji anopa kukwanisa kutumira shanduro yepasi rese SWIFT kutumira paIndaneti kubva kubhangi yako yeBhangi pasina kubva kumba.
Kutumira mari kune imwe nyika, tumira mari yako yebhangi (iyo "Internet banking", "online client") muchikwata chekuendesa kune dzimwe nyika, uye kuzadza ruzivo rwakakosha pamusoro pomubatsiri, iwe uchakwanisika kutumira mari kune imwe nyika kune imwe nyika mari yezvinowanikwa.
Kana zvikaonekwa semibvunzo, unogona kushevedza Bhizinesi rako uye kuwana mazano akawanda anyanzvi.
Nzira yekutumira mari zvakananga kubva kuBanki?
Chero Bhengi munyika yako inobvumira kutamisa SWIFT. Kushanyira Bhanga uye kutaurira chinangwa chako chekutengesa uye kupa Bhengi ruzivo pamusoro pomubatsiri zvakananga kumushandi weBhange. Vashandi veBhangi vachaita uye vanopedzisa zvose nokuda kwenyu, mushandisirwo wekutengeserana haugoni kutora maminetsi anopfuura 15.
Ndeipi iyo mubhadharo wekubhadhara inodiwa yekutengesa?
Kuendesa mari kune dzimwe nyika mutengi anoda kuziva zvizere zvese zve SWIFT zvisikwa kana vanhu vemutemo, izvo kutumirwa kutumirwa.
Mashoko acho ndeokuti:
- zita reBhizinesi rekubatsira (muenzaniso BANGKOK BANK PUBLIC CO..LTD)
- kode mu SWIFT system (muenzaniso BKKBTHBK )
- nhamba nenyaya yeaigamuchira
- zita nezita remugamuchira
I SWIFT yakakodzera kutumira kuendeswa kune zviitiko zvinotevera:
- Kuitwa kwemari yakawanda kune dzimwe nyika nekuderedza mitero yeKomisheni.
- Kutenga mabhizimusi online.
- Kubhadhara kwebasa rekambani dzedzimwe nyika.
- Kuendesa mari yakawanda kune vamwe kune zvimwe zvinangwa.
Zvisinei, inofanira kuonekwa kuti zvose zvese zvakaitwa mu SWIFT system zvakachengeteka zvachose.
Zvose, kusanganisira mari, mutoro waro, inotorwa nehurongwa pachahwo. Kubatanidzwa kwezviitiko zvinonzwisisika uye zvemuviri hazvibvumiri kuchinja chero kupi zvako, kunze kwekuti, kuvhara kunokosha kunoita kuti zvibvirire kugadzirisa shoko panguva yekuendesa kwayo kuburikidza neS SWIFT.
Kunze kwese mutengi uye mupiriri, hakuna munhu anogona kuverenga zviri mukati.
Nhanho yekutumira SWIFT kutamira kunze kwenyika?
Kazhinji mari yacho inosvika kumubatsiri mukati maawa 24 (mazuva ekushanda). Nguva yakareba yekugadzirisa inotora mazuva e3-5 kuti ave paakawana gwaro rekugamuchira.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekubhadharisa nokukurumidza kwekuraira kwako pawebsite yedu, tapota taura nesu
Kudzoka Kwatingawana HGH muThailand? Kutumira & kubhadhara FAQ